देशभर २४ घण्टामा थपिए ५९३ कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १२ असार-देशभर पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा उपत्यकाका सहित देशभर ५९३ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा ५९३ जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संक्रमित हुनेमा धेरै पुरुष रहेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार थपिएका संक्रमितमा १०७ जना महिला रहेका छन् भने ५८६ जना पुरुष रहेका छन् । हालसम्म १ हजार २४९ जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिँदा १० हजार ५०६ पुरुष पुरुष संक्रमित भएका छन् । नेपालमा कूल संक्रमितको संख्या ११ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ । रसुवा जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा कोरोना फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४८ जना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म २ हजार ६९८ जना कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ६ हजार ५३४ नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने अहिलेसम्म २ लाख ६ हजार २७१ नमुनाको परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आरडीटी विधिबाट २ हजार ४८६ जनाको र अहिलेसम्म २ लाख ९० हजार ३४९ जनाको परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।
देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म ७१ हजार १२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या भने बढेको छ । ९ हजार ३० जना देशभरका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक गर्नु खुलेआम भ्रष्टाचार : कमल थापा
‘कालापानीसँगै भारतले मिचेका सबै भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरियाेस्’